देश – Page 1092 – YesKathmandu.com
एस काठमाडौं आइतबार २४, फागुन २०७१
पोखरा । पोखराको कस्मेटिक पसलमा रमाइरहेकी युवती । एक युवकसँग अप्रत्यासित भेट । निरन्तरको भेटले उनीहरुवीच झांगिएको माया । त्यो मायाले फेरेको बिहेको रुप । त्यसपछि निरन्तर धोकै धोका । कुनै फिल्मको प्लटजस्तै लाग्ने यो…
दोहा (कतार) । बाबा तपाई किन नआउनुभएको ?, ७ बर्षे छोरीले फोनमा सोधिराख्दा काभ्रेका बिष्णु उप्रेती भक्कादिदै थिए । कतारको हमाद अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु प्रतिक्षा कक्षमा तीन दिनदेखि बसिरहेका उप्रेतीले छोरीलाई सम्झाउँदै थिए, नेपालमा प्लेन…
एस काठमाडौं शनिबार २३, फागुन २०७१
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमान स्थल काठमाडौंमा बुधवार विहान भएको टर्किस एयरलाइन्सको विमानलाई धावन मार्गमा ल्याइएको छ । चारदिनको प्रयास पछि विमानलाई घाँसे मैदानबाट रनवेमा ल्याइएपछि शनिवार दिउसो २ बजेदेखि अन्तराष्टिय उडान सुरु हुन सक्ने…
सञ्चारकर्मी चन्दालाई नेशनल क्यापिटल अवार्ड
काठमाडौ, । क्यापिटल ईभेन्ट मेनेजमेन्टले सञ्चारकर्मी तथा चन्दा प्रोडक्सनकी प्रबन्ध निर्देशक चन्दा घिमिरे नेशनल क्यापिटल अवार्ड २०१५ बाट सम्मान गरेको छ । घिमिरे महिला सञ्चारकर्मी अवार्डबाट सम्मानित भएकी हुन् । आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको…
काठमाडौं, । एउटा नेपाली पुरुषले बढीमा कतिपटक बिहे गर्न सक्छ ? दुईपटक ,चारपटक वा पाँचपटक ? या दर्जनसम्म ? तपाईं यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने अनुमान निकै कम छ । धादिङ,निगालेका कर्णमान सिंह बस्नेतले आफ्नो जिन्दगीमा…
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी)ले विवाहको नकावमा लाखौं रुपैयाँ उठाई युवतीलाई चीन र दक्षिण कोरिया पठाउने गिरोहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका केही कर्मचारीको सहयोग रहेको जनाएको छ। ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा…